Mirohotra ao Kamerona Ny Olona Mba Hijery Ny Fisehoan’i Jesoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2014 21:47 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, русский, Swahili, বাংলা, English
Nandre vaovao ny mponina ao Yaoundé, renivohitr'i Kamerona ny marainan'ny Alarobia 16 aprily 2014 fa niseho tao an-tranon'olona ao amin'ny faritra Odza i Jesoa Kristy. Niteraka firohotana faobe izany raha nitangorona teo akaikin'ilay trano ireo mpino sy ireo liana te-hahafantatra fotsiny mba hijery mivantana izany fahagagana amin'ny andro Paska izany.
Andro vitsy taty aoriana, nitsipaka izany lazaina ho fisehoan'i Kristy izany ilay Arsevekan'i Douala, Monsenera Samuel Kleda, ary nilaza fa tsaho izany, saingy tsy nanakana ny fientanam-pon'ireo mpino izay mbola nisisika nirohotra nankany an-tranon'i Amougui Minkan izany. Nisy mihitsy aza ny sasany nananika ny fefy manodidina ilay trano mba hiala amin'ny filaharam-be.
Nanjary anisan'ny lohahevira malaza avy hatrany tao amin'ny Twitter ao Kamerona ity vaovao fisehoan'i Kristy ity. Nisioka momba ny vaovao tamin'ny tsy finoana sy amim-pieritreretana ireo sioka isan-karazany.
Nanontany izay tena hitan'ny vahoaka marina teo amin'ny rindrina lay bilaogera @ngimbis:
Jésus sur le mur à Odza. Massa! faut avoir les lunettes de visée céleste pour le voir hein? pic.twitter.com/abbseMEAWk
Jesoa eo amin'ny rindrina ao Odza! Ry namana, mila masom-pijerena avy any an-danitra ny mijery azy an?
Maro kosa ireo nahita izany ho mahatsikaiky raha nisafidy an'i Kamerona i Jesoa hisehoana:
Niverina i Jesoa ?? tpt na dia hiverina aza Jesosy dia tsy ho ao Kamerona… izany mihitsy !
Tsy kisendrasendra ny nisehoan'i Jesosy tao Odza, akaikin'i Nsimalen, faritra notadidian'ny maro ho efa nisehoan'i Maria, renin'i Jesoa tamin'ny volana Mey 1986 ihany koa:
Toa nifindra tamina fokontany roa mifanakaiky i Jesosy sy ny reniny: Odza sy Nsimalen!! Voatahy i Kamerona
Niverina tamin'ny adihevitra taloha mikasika ny razana niavian'i Jesosy kosa i @ntrjack :
Ry namana, na dia tamin'ny fisehoany aza i Jesoa dia fotsy. Tapitra ny adihevitra
@lesikanel nivazivazy hoe:
Mbola miandry foana ny fandefasana Selfie miaraka amin'i Jesoa ao Odza aho
Hoan'ny sasany, fanararaotana hanaovana fanehoan-kevitra ara-tsosialy sy ara-politika ny fisehoan'i Jesosy. Hoan'i @TjatBass, tsy misy fiantrakainy ny fisehoan'i Jesoa tao Yaoundé:
Tena tian'i Jesoa i Kamerona a! Saingy misy foana ny fahantrana, maro ny tsy rariny ary maro ireo olona maty.
@ngimbis kosa nampatsiahy ny Kameroniana fa sady tsy hita no tsy heno ny filoha Paul Biya hatramin'ny nanatrehany ny Fihaonam-ben'i Afrika-Vondrona Eoropeana tao Bruxelles tamin'ny 2 sy 3 aprily 2014 :
Raha izany tokoa, hoavy hisolo vonjimaika an'ny filohantsika izay tsy hita nanomboka tamin'ny fihaonamben'i Vondrona Eoropeana i Jesoan'i Odza.
Niroborobo ny bizina tao Odza hatramin'ny nisian'ny fisehoan'i Jesoa. Anisan'izany ireo tompon'ny trano izay voalaza fa nisehoan'i Jesosy ary mangataka fanomezana ankehitriny:
Niseho tao Kamerona ao Yaoundé tao an-tranon'olona i Jesoa zanak'Andriamanitra nandritra ny herinandro masina. Andoavam-bola ny miditra amin'izany.
Herinandro taorian'ny nanombohan'ity tantaran'i Jesosy tao Odza ity, mbola marobe ireo manao fivahinianana ao Odza raha toa mbola mitohy kosa ny mandrangitra ny adihevitra mikasika ny tena fahamarinan'ity fisehoan'i Jesoa ity. Mandritra izany, ny fijery tena manjaka amin'izao dia ity nolazain'i @Difredsimpson tamin'ny fomba miavaka ity:
Jesoa ao Yaoudé hahahahaha, hadalana taimboraky ny volana
14 ora izayMediam-bahoaka